Iji jQuery mee ka ihe ọ Juụiceụ gaa Web peeji nke | Martech Zone
Wenezdee, Machị 18, 2009 Sọnde, Febụwarị 17, 2013 Douglas Karr
jQuery mere ihe a.
Mee ọchụchọ maka jQuery + ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla, ị ga-ahụkwa na ndị mmepe ewulitela ihe ngwọta, akpọrọ plugins, ndị dị njikere ịga! N'okwu a, emere m ọchụchọ maka "jQuery carousel" wee chọta ihe dị egwu, zuru ezu jQuery carousel ngwọta na Dynamic Drive.
Ihe ọzọ dị mma banyere jQuery bụ na ọ bụ Google na-akwado koodu ugbu a. N'ihi ya, ịkwesighi ibudata jQuery na sava nke gị, ma ọ bụ ndị na-agụ weebụsaịtị gị agaghị ebudata ya oge ọ bụla. Ọ bụrụ na ha abanyela n'otu saịtị na jQuery, a ga-echekwa ya maka ojiji na saịtị gị!
Nanị tinye koodu ahụ na mkpado isi gị ma ị na-apụ ma na-agba ọsọ na jQuery:
Iji na-agba ọsọ na carousel, m ga-ebugote ma zoo akwụkwọ edemede stepcarousel:
Mgbe nke ahụ gasịrị, ịgbanwe peeji ahụ dị mfe! M tinyere carousel m n’ime div mygallery na warara nke ogwe n'ime oku a na-akpọ belt. M wee tinye obere chunk nke ntọala koodu n'ime ahụ m na mkpado.
Nwere ike hazie ihe a obere. Na nke a ka m gbanwetụrụ edemede na-agba ọsọ na-akpaghị aka mgbe peeji ibu. Emere m ọsọ na oge nke ngosipụta ọ bụla gosipụtara, yana bọtịnụ iji aka jiri aka gị megharịa ogwe aka ekpe na aka nri. Akụkụ ọzọ dị jụụ nke ngwa mgbakwunye a - mgbe ị ruru na ngalaba ikpeazụ, ọ rewa azụ laghachi na nke mbu!
M ugbu a na-ewughachi m website na aiming maka igba egbe a izu ụka ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma. Ana m eji jQuery maka akụkụ ole na ole ya ma enweghị mkpesa ọ bụla. Ihe niile yiri ka ọ na-enyefe "web 2.0" ahụ na-enwe mmetụta na olile anya na ọ ga-eto naanị saịtị gwụchara.